Ngwa Carbon Fiber
Alumini Foil Fiberglass Fabric
PTFE Faiba glaasi ákwà
site na nchịkwa na 21-10-11
Ọ bụrụ na i jirila igwe egwuregwu kacha mma, ihe mmetụta ya nwere oke ọfụma, DPI dị elu na ụkwụ PTFE dị larịị enweghị ikewapụ site na ịdị elu dị elu ịkwaga ya. N'ezie, enwere ike nyochaa mkpanaka gị na -enweghị mpe mpe akwa, mana ọ gaghị aga nke ọma, ọ nwere ike rie gị okirikiri. Nke a bụ ihe mere ị ...
Ihe 38 maka ndị umengwụ mana chọrọ ụlọ dị ọcha
site na nchịkwa na 21-09-23
Dee ụbọchị ahụrụ na ụfọdụ ngwa ụlọ nke ị na -eleghara anya nwere akara dị ọcha taa. Anyị na -atụ anya na ị masịrị ngwaahịa anyị na -akwado! Ndị editọ anyị họpụtara ha niile. Biko mara na ọ bụrụ na ị kpebie ịzụta site na njikọ dị na ibe a, BuzzFeed nwere ike ...
site na nchịkwa na 21-09-22
Kọmputa ọkwa iko eriri mkpuchi ihe akwa
site na nchịkwa na 21-09-08
Ọdụdọ mkpuchi iko eriri ákwà, thermal mkpuchi iko eriri ákwà - isi mmiri. Ihe mejupụtara ya bụ silica, alumina, calcium oxide, boron oxide, magnesium oxide, sodium oxide, wdg dịka ọdịnaya alkali dị na iko ahụ, enwere ike kee ya na mgbochi corrosion FRP c ...
Ihe mejupụtara na akụrụngwa nke eriri iko
site na nchịkwa na 21-09-02
Iko a na -eji emepụta eriri iko dị iche na ngwaahịa iko ndị ọzọ. Iko a na -eji eriri eji ere ahịa n'ụwa bụ silica, alumina, calcium oxide, boron oxide, magnesium oxide, sodium oxide, wdg dịka ọdịnaya alkali dị na iko ahụ, ọ ...
Banyere eriri eriri
site na nchịkwa na 21-08-23
Nhazi ọkwa nke eriri iko Dị ka udi na ogologo si dị, enwere ike kee eriri iko n'ime eriri na -aga n'ihu, eriri ogologo edoziri na ajị iko; Dị ka ihe mejupụtara iko, enwere ike kewaa ya na alkali n'efu, na -eguzogide ọgwụ, alkali dị elu, ọkara alkali, ike dị elu, elu ela ...
Njirimara nke eriri iko
Fiber iko nwere nguzogide okpomoku dị elu karịa eriri organic, anaghị ere ọkụ, nkwụsị corrosion, ezigbo mkpuchi mkpuchi na mkpuchi mkpuchi (ọkachasị ajị iko), ike mgbatị dị elu na mkpuchi ọkụ dị mma (dị ka eriri iko na -enweghị alkali). Agbanyeghị, ọ na -emebi emebi ma nwee ndị ogbenye anyị ...
Ọnụ ahịa ahịa blanket ọkụ ọkụ na uto 2021-2028
site na nchịkwa na 21-08-14
Akwụkwọ nyocha ahịa ahịa blanket ọkụ ọkụ ịgbado ọkụ na -ezube ịnye ozi mgbakọ na mwepụ, dị ka amụma ahịa ụlọ ọrụ, ọnụego uto kwa afọ, ihe ndị na -anya ụgbọ ala, ihe ịma aka, ụdị ngwaahịa, oke ngwa yana ndapụta asọmpi. Nnyocha ahịa blanket ahịa ọkụ ọkụ ọkụ na -enye ...
site na nchịkwa na 21-08-09
Glass fiber bụ ezigbo ihe mkpuchi ihe! Iko iko bụ ihe na-adịghị ahụkebe nke na-enweghị ọla nwere ezigbo ihe .. Ihe mejupụtara ya bụ silica, alumina, calcium oxide, boron oxide, magnesium oxide, sodium oxide, wdg.
Ekwentị/WeChat: +86 18622623855
Ihe 38 maka ndị umengwụ mana chọrọ ...
Kọmputa ọkwa iko eriri mkpuchi ihe c ...
Copyright - 2010-2020: Edebere ikikere nile. Atụmatụ - Ngwaahịa na -ekpo ọkụ - Map saịtị
4x4 Fiber Carbon Twill, Fiber Carbon Fiber, Ngwa Carbon Fiber Twill Fabric, Twill Weave Carbon Fiber, Silicone akwa, 2x2 Fiber Carbon Twill,